के हावाको मान्छेले गर्न सक्छ? कसरी रोबोटिक पवन टर्बाइनले तेल उद्योगलाई खलल पार्दै छ - किम्रोय बेली समूह
सामान्य समाचार, नवीकरणीय ऊर्जा
हाम्रो ग्लोबल उर्जा दृष्टि
के तपाईं हावाको स्वामित्व लिन सक्नुहुन्छ? तपाईं यो किन्न सक्नुहुन्छ? के यो केवल छानिएका देशहरूमा उडाउँछ? के हावा केवल अरब राज्यहरूको लिगमा बसन्छ? ऊर्जा सूचना संघका अनुसार, विश्वको of%% तेल संयुक्त राज्य, सउदी अरेबिया, रसिया र क्यानडालगायत १० राष्ट्रले उत्पादन गर्दछ। तर तेल र प्राकृतिक ग्यासको विपरित हावा उर्जा कुनै खास ठाउँमा वा एउटा विशेष देशमा हुन बाध्य छैन। हावा चार कुनामाबाट सम्पूर्ण पृथ्वी भरि चलिरहन्छ।
उत्पादन र उत्पादन देशको विकासको मेरुदण्ड हो र हावा प्रविधिको खेल परिवर्तनकर्ता हो जुन अहिले विनिर्माण राष्ट्रहरूमाझ खेल मैदानको स्तरमा पुग्न सक्षम छ। र हे! जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान वा तथाकथित मैन्युफैक्चरिंग विशाल चीन चीनमा रहेका देशहरूमा, केबी ग्रुपको नयाँ टेक्नोलोजीको मतलब भनेको कम लागतको उत्पादन कुनै पनि समयमा कहिँ पनि हुन सक्छ। सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, निर्माणलाई उर्जा चाहिन्छ, र हाम्रो अग्रिम रोबोटिक वायु टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर हामी ज the्गलको सबैभन्दा टाढाको घाँटीमा शक्ति प्रदान गर्दैछौं।
र यसले तपाइँको लागि के अर्थ राख्दछ, एक विकासशील देश, एक सानो किसान, एक मध्यम आय घर व्यापारिक विचार संग?
उत्पादन गर्न सक्षम हुनुको मतलब तपाईले बेच्नको लागि सक्षम हुनु हो र बेच्नको लागि सक्षम हुनु भनेको तपाई कमाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले कमाउन सक्नु भएकोले हामीलाई खुशी, धेरै खुसी बनाउँछ। र हामी तपाई एक हात मा कमाई र यो सबै तेल को आयात वा अर्को मा महँगो ऊर्जा उत्पादन मा खर्च गर्न चाहँदैनौं। हामी तपाइँ कमाउन र बच्चाहरूको लागि पैतृक सम्पत्ति छोड्न चाहन्छौं! हाम्रो नवीकरणीय उर्जा समाधानहरूको प्रयोग गरेर तपाईं आफ्नो मार्जिन अधिकतम गर्न सक्नुहुन्छ र प्रतिस्पर्धी मात्र होइन तर लाभदायक पनि हुनुहुनेछ। हाम्रो ग्लोबल भिजन जाँच गर्नका लागि समय निकाल्नुहोस्, यो हामी को हो, हामी यही हो। हामी साउदी अरेबिया, रसिया, चीन र सबै 'राक्षसहरू' लाई आजको उर्जा र उत्पादन प्रसंगमा प्रेम गर्दछौं तर हामी आटा फैलाउन र औसत जोलाई आफ्नो टोकरी विस्तार गर्न अनुमति दिन उत्सुक छौं। आह, जसरी स्वर्गमा छ, पृथ्वीमा पनि त्यस्तै हुनेछ।
किम्रोय बेली समूहले एक रोबोटिक पवन टेक्नोलोजी विकसित गरेको छ जुन अत्यधिक कम वायु क्षेत्रहरूमा पनि प्रयोगयोग्य बिजुली ऊर्जामा हावा चलाउन सक्षम छ। यो टेक्नोलोजीले विश्वको तल्लो हावा क्षेत्रको% 38% भन्दा बढी क्षेत्रलाई हावाको वेगसँगै कम ऊर्जा उत्पादन गर्न अनुमति दिन्छ अब पवन टेक्नोलोजीमा लगानी औचित्य प्रमाणित गर्न पर्याप्त ऊर्जा उत्पादन गर्न।
हाम्रो रोबोटिक हावा टर्बाइनको उद्देश्य सानादेखि मेगा आकारको हावा टर्वाइनहरू कम तातो वेगमा पनि ठूलो मात्रामा उर्जा उत्पादन गर्न सक्षम गर्न सक्षम गर्नु हो। यसले कम हावा भएका देशहरू, शहरहरू, प्रान्तहरू, छिमेकहरू र ठाउँहरू जुन हाम्रो हावा टर्बाइन उर्जा उत्पादन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर स significantly्केत गर्दछ। हाम्रो बहाव पकड?
हामी किन ऊर्जाको ख्याल राख्छौं? - हात्तीलाई सम्बोधन गर्दै।
हामी एक हाइब्रिड कम्पनी हो जसले नवीकरणीय उर्जा उत्पादनहरू (सौर र हावा) लाई रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, र सेन्सर टेक्नोलोजीसँग जोड्दछौं। हामी आविष्कारकर्ता र निर्माणकर्ताहरू हौं आफैँ बजारमा कम्पनीहरूको छाता अन्तर्गत बहुविध उत्पादनहरूको साथ। जब तपाईं अनुसन्धान र विकास, डिजाइन, प्रोटोटाइप, बीटा परीक्षण, मास मैन्युफ्याक्चरिंगको माध्यमबाट उत्पादनहरू लिइरहनुभएको छ भने तपाईंलाई प्रत्येक चरणको बिजुली खर्चको चुटकी महसुस हुन्छ। यदि यो हाम्रो व्यापार मोडेलमा एकीकृत नवीकरणीय उर्जा समाधानका लागि नभएको भए हाम्रा धेरै उत्पादनहरू केवल विचारका रूपमा रहन सक्थे र हामी पनि लगातार बढ्दो बिजुली लागतमा दबिने छौं।
नविकरणयोग्य उर्जा र रोबोटिक्स अन्तरिक्ष भित्र डिजिटल टेक्नोलोजी प्रयोग गर्ने निर्माताको हैसियतमा, हामी अन्य निर्माणकर्ताहरूले सामना गर्ने कठोरताहरू चिन्छौं - त्यसैले हामी कुराकानी गर्न सक्छौं। एक पटक तपाईले उच्च क्षमतामा निर्माण गरिसक्नु भएपछि, ऊर्जा लागतहरू धेरै चाँडै प्रमुख चिन्ताको विषय बन्नुहुन्छ। कुनै पनि उद्योगमा कुनै सामूहिक निर्माताले तपाईंलाई भन्नेछ कि व्यापार बनाउँदछ र उत्पादनहरू, वस्तुहरू र सेवाहरू मथित गर्दछ र सारा विश्वभरि यसका लागि ढुवानी हुन्छ, ऊर्जा चाहिन्छ, धेरै धेरै ऊर्जा चाहिन्छ।
त्यसोभए टेक स्पेसमा भइरहेको सबै पाइलाहरूको तुलनामा उर्जा क्षेत्र अझै पनि किन सापेक्ष डायनासोर हो?
तेल राक्षसको व्यापार मोडल केवल तेल बेच्न र नाफालाई बाँच्नको लागि हो; आविष्कार गर्न आवश्यक पर्दैन, नवीकरणयोग्यहरूलाई चलाउन आवश्यक पर्दैन। विडंबना यो हो कि, हरेक वर्ष अनुसन्धानहरू प्रकाशित हुन्छन् विश्वको तेल आपूर्तिमा टाइम स्ट्याम्प स indic्केत गर्दै, यी कम्पनीहरूले प्रमाण देख्छन् कि एक तेल क्षेत्र अर्कोको पछि बन्द हुन्छ। यसको जवाफ सँधै तिनीहरूको अगाडि नै रहेको छ, सृष्टिको पहिलो दिनमा परमेश्वरले हावा र सूर्य दुबैलाई सिर्जना गर्नुभयो, यी प्राकृतिक संसाधनहरू सधैं हामीसँग हुन्छन्। यो समय हामी स्वर्गका स्रोतहरु लाई प्रयोग गरीन्छ सबै मानिस दयालु, न केवल धनीहरुलाई। जब १० काउन्टरहरूले विश्वको of०% तेल आपूर्ति गर्दछन् तब उनीहरूले आफ्नो हातमा अन्य १ 10 70 देशहरूको भाग्य समात्नेछन्। तिनीहरूले मूल्य सेट गर्न सक्छन्, बजार नियन्त्रण र ट्रेड डिक्टेन्ट गर्न सक्दछन्। त्यसोभए किन नवीनता, किन परिवर्तन, किन विकास?
किम्रोय बेली समूह विकासको सुरुवात गर्न यहाँ छ, हाम्रो लक्ष्य भनेको यो सुनिश्चित गर्नु हो कि उत्पादकहरूको लागि उर्जा लागत सकेसम्म सस्तो छ। आजका कारखानाहरूसँग डिजिटल निर्माणको लागि फेन्सी मेशिनरी छन् तर बिजुली उत्पादनको पुरानो, पुरानो विधिहरू। हामी मुख्यतया तेल र ग्यासबाट बिजुलीको लागि उपलब्ध विकल्पहरूको विविधीकरणमा प्रमुख भूमिका खेल्दैछौं।
यसैकारण हामीले नवीकरणीय उर्जा र रोबोटिक्सका दुई क्षेत्रहरू वरिपरिको हाम्रो कम्पनी निर्माण गरेका छौं। १ group1760० को औद्योगिक क्रान्ति पछि तेलमा बनेको पुरानो डायनासोर उर्जा क्षेत्रलाई झगडा गर्न र २१ औं शताब्दीमा यसलाई ड्र्याग गर्न हाम्रो समूहको शरीरका हातहरू, नवीकरणीय उर्जा र रोबोटिक्स। र के अनुमान? यो कुनै २०-वर्ष दर्शन हो, आज यो हो, यो अहिले हो!
हामी स्वीकार गर्दछौं कि त्यहाँ केही प्रगतिहरू भएका छन् र विद्युत्को लागत घटाउन ऊर्जा क्षेत्रमा निरन्तर कदम चालिनेछ। तर यो पर्याप्त छिटो भएको छैन। हावा टर्बाइनलाई नाविकहरूले १ 1600०० र centuries शताब्दीमा आविष्कार गरेको थियो तर पछि त्यति परिवर्तन भएको छैन। हामीलाई ठूला दर्शनहरू चाहिन्छ, नविकरणयोग्य ऊर्जा संचालित जहाजहरू, विमानहरू, सम्पूर्ण देशहरू जुन हाम्रो हावा र सौर्य टेक्नोलोजीहरू द्वारा मात्र विशेष रूपमा संचालित हुन्छ सोच्नुहोस्। किम्रोय बेली समूह यहाँ नविकरण उद्योगको गतिलाई मात्र तीव्र पार्नको लागि नभई उपभोक्तालाई सस्तो हुने सुनिश्चित गर्न यहाँ छ। हाम्रो सबैभन्दा नयाँ उत्पादन रोबोटिक हावा टर्बाइनले हावा उद्योगमा क्रान्तिकारीकरण मात्र गर्दैन तर निर्माताहरू र घर मालिकहरूलाई बोर्डमा प्रवेश गर्नका लागि प्रवेश बाधा हटाउँदछ र हावासँगै उनीहरूको सम्पत्तीहरू बिजुली बनाउँछ।
07May7सक्छ, 2012
शीर्ष १० 'रोबोटिक' देशहरू जापान टप १० रोबोटिक्स अनुसन्धान गर्न ठाउँहरू रोपोट क्राइम र सेक्युरिटीहाउस वर्कइन्टरप्राइजेसन मानव सहयोग थप पढ्नुहोस्
06Feb फेब्रुअरी 6, 2014
एक हावा टर्बाइनले सम्पूर्ण समुदायलाई शक्ति दिन्छ!
जब म युनिभर्सिटीमा इलेक्ट्रिकल र कम्प्युटर इञ्जिनियरि studying पढ्दै थिएँ मैले एक जवान मलावियनको टेड भाषण देखे ... थप पढ्नुहोस्
03Mar मार्च 3, 2013
एक अपतटीय हावा फार्म कोष
हालसालै असफल भएको एलएनजी परियोजनाको कोषबाट $०२ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च हुन सक्ने आशा गरिएको थियो। थप पढ्नुहोस्
27सेप्टेम्बर सेप्टेम्बर 27, 2012
इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोनिक्स ईन्जिनियरहरूको संस्थान (आईईईई) पावर एण्ड एनर्जी सोसाइटीले एक बृहत ट्रान्समिशन र ... थप पढ्नुहोस्